သင်ဒီမှာပါ: Home / အဘို့အမော်ကွန်း ကြီးထွားလာ Solutions / ဘယ်လိုတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်
အဆိုပါ aquaponics ကမ္ဘာကြီး, ဒီနေ့ခေတ်က်ဘ်ဆိုက်များ aquaponics ဖို့တစ်ခုတည်းကိုသာဆက်ကပ်အပ်နှံဖြစ်ကြောင်းတကယ်တော့ဒါကြီးမားတဲ့ဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါကဒီမှာဘယ်မှာရပ်သလဲ? ကောင်းပြီ, ဒီမှာငါ့အရည်မှန်းချက်ကိုသင်လမ်းကိုပြသရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရုံတကား! အဘယ်သူမျှမကပိုနှင့်မျှမလျော့နည်း! သင်အထူးသဖြင့်အပိုင်း, aquaponics ၏အဓိက "စတိုင်" ကိုကိုယ်စားပြုမယ့်အချို့ aquaponics ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာကဒီမှာတွေ့လိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
ရော်ဂျာ Pilon ။ အယ်ဒီတာ